ပါတီမိတ်ဆက် (လမ်းပြကြယ်ပါတီ – G.S.P.) – Voice of Myanmar
ပါတီမိတ်ဆက် (လမ်းပြကြယ်ပါတီ – G.S.P.)
မန္တလေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၅-၂၀၂၀
လာမယ့်၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ့်ပါတီတွေထဲကနေ နိုင်ငံရေးပါတီမိတ်ဆက်အစီအစဉ်အဖြစ် လမ်းပြကြယ်ပါတီနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
လမ်းပြကြယ်ပါတီအကြောင်းသိနိုင်ဖို့ လမ်းပြကြယ်ပါတီရဲ့ ဗဟိုအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦိးညိုလင်းမောင်ကို VOMသတင်းထောက်လဲ့လဲ့ဝင်းကမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးညိုလင်းမောင် – ကျနော်တို့ပါတီမှာက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်သူ ၃ ဦးရှိပါတယ်။
VOM – ပါတီရဲ့ကတိကဝတ်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ။
ဦးညိုလင်းမောင် – လောလောဆယ်ကတော့ကျနော်တို့ဆောင်ပုဒ်ရေးထားတာပေါ့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကာကွယ်ဖို့။ အခုကကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ကျနော်တို့ကျန်တဲ့ဆိုင်းငံ့နေရာတွေ ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးဝါးမှုတွေကြောင့် စည်းရုံးရေးမှုလုပ်ဖို့ကိုလည်းကိုယ့်ကြောင့်ပြည်သူတွေရောဂါမရောက်စေချင်ဘူးလေ။
ဦးညိုလင်းမောင် – အခုကတော့လက်ရှိပဲခူးမြို့နယ်မှာ ပြည်သူလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၁၊ တိုင်းဒေသကြီး၂ မှာကျနော်တို့ယှဉ်ပြိုင်မယ်။ သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာ ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့၊ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာကိုကာကွယ်ဖို့လောက်ဘဲ။ဒီနှစ်ကတော့ရန်ကုန်အခြေနေအရရော၊နိုင်ငံရေးရဲ့လက်ရှိဖြစ်စဉ်အနေထားအရရော အဲပေါ်မှာသုံးသပ်ပြီးကျနော်တို့ပါတီ ၃နေရာမပျက် ယှဉ်မှာပါ။
ဦးညိုလင်းမောင် – ကျနော်တို့ပါတီက၂၀၁၅မှ ဝင်ပြိုင်တာ ဒါကြောင့်မနိုင်သေးဘူး။ဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲ၂ကြိမ်ဝင်ပြိုင်သေးတာ။
ဦးညိုလင်းမောင် – လွှတ်တော်မှာရွေးချယ်ခံရလို့ရှိရင် လွှတ်တော်မှာပြည်သူလူထုအတွက်ကိုပြောရဲဆိုရဲလူ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သူကိုရွေးတာ။
ဦးညိုလင်းမောင် – ၆ထောင်ကျော်ရှိတယ်။
VOM – ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကဘာဖြစ်မလဲ။
ဦးညိုလင်းမောင် – အလုပ်လုပ်ပါ ၊ အလုပ်လုပ်ပါ ၊ အလုပ်လုပ်ပါ ။
#voiceofmyanmar #VOM #နိုင်ငံရေးပါတီမိတ်ဆက်
ပါတီမိတ္ဆက္ (လမ္းျပၾကယ္ပါတီ – G.S.P.)
မႏၲေလး၊ စက္တင္ဘာ ၂၅-၂၀၂၀
လာမယ့္၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာလ၈ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာဝင္ၿပိဳင္မယ့္ပါတီေတြထဲကေန ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္အစီအစဥ္အျဖစ္ လမ္းျပၾကယ္ပါတီနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။
လမ္းျပၾကယ္ပါတီအေၾကာင္းသိႏိုင္ဖို႔ လမ္းျပၾကယ္ပါတီရဲ႕ ဗဟိုအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦိးညိဳလင္းေမာင္ကို VOMသတင္းေထာက္လဲ့လဲ့ဝင္းကေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – က်ေနာ္တို႔ပါတီမွာက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္သူ ၃ ဦးရွိပါတယ္။
VOM – ပါတီရဲ႕ကတိကဝတ္ကဘာေတြျဖစ္မလဲ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – ေလာေလာဆယ္ကေတာ့က်ေနာ္တို႔ေဆာင္ပုဒ္ေရးထားတာေပါ့ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္႐ြာကာကြယ္ဖို႔။ အခုကကိုဗစ္ေရာဂါအေျခအေနေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က်န္တဲ့ဆိုင္းငံ့ေနရာေတြ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးဝါးမႈေတြေၾကာင့္ စည္း႐ုံးေရးမႈလုပ္ဖို႔ကိုလည္းကိုယ့္ေၾကာင့္ျပည္သူေတြေရာဂါမေရာက္ေစခ်င္ဘူးေလ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – အခုကေတာ့လက္ရွိပဲခူးၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၊ တိုင္းေဒသႀကီး၂ မွာက်ေနာ္တို႔ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္။ သီးသန႔္ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္႐ြာ ကိုကာကြယ္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးေပါ့၊ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္႐ြာကိုကာကြယ္ဖို႔ေလာက္ဘဲ။ဒီႏွစ္ကေတာ့ရန္ကုန္အေျခေနအရေရာ၊ႏိုင္ငံေရးရဲ႕လက္ရွိျဖစ္စဥ္အေနထားအရေရာ အဲေပၚမွာသုံးသပ္ၿပီးက်ေနာ္တို႔ပါတီ ၃ေနရာမပ်က္ ယွဥ္မွာပါ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – က်ေနာ္တို႔ပါတီက၂၀၁၅မွ ဝင္ၿပိဳင္တာ ဒါေၾကာင့္မႏိုင္ေသးဘူး။ဒီႏွစ္နဲ႔ဆိုရင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၂ႀကိမ္ဝင္ၿပိဳင္ေသးတာ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – လႊတ္ေတာ္မွာေ႐ြးခ်ယ္ခံရလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္မွာျပည္သူလူထုအတြက္ကိုေျပာရဲဆိုရဲလူ၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ လုပ္တတ္ကိုင္တတ္သူကိုေ႐ြးတာ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – ၆ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္။
VOM – ပါတီရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ကဘာျဖစ္မလဲ။
ဦးညိဳလင္းေမာင္ – အလုပ္လုပ္ပါ ၊ အလုပ္လုပ္ပါ ၊ အလုပ္လုပ္ပါ ။
#voiceofmyanmar #VOM #ႏိုင္ငံေရးပါတီမိတ္ဆက္
Election, Interview, ပါတီမိတ်ဆက်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၂၁ အေးချမ်းသူ (VOM) တပ်မတော်က အာ့ကြောင့်အာဏာရယူခဲ့လဲ။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။...
မန္တလေး-ဖေဖေါ်ဝါရီ-၁၃-၂၀၂၁ Voice Of Myanmar နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို အာဏာသိမ်းအစိုးရလို့ ရေးတာဟာ...
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂-၂၀၂၁ ၇၄နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အကျဉ်းသား ၂၀၀၀၀ကျော်ကို နစအ ကောင်စီက ပုဒ်မ...